उडिरहेको चराको दिशा श’रीरमा पर्नु शुभ कि अशुभ ? – Life Nepali
उडिरहेको चराको दिशा श’रीरमा पर्नु शुभ कि अशुभ ?
काठमाडौं । बिभिन्न कामका का’रण हामी बाहिर नि’स्किने गर्दछौँ । तर बाहिर नि’स्किँदा सं’योगवश हाम्रो श’रीरमा पं’क्षीहरुको दिशा पर्छ र हामी कतिपयले त त्यसको अ’नुभव पनि लि’इसकेका हुन्छौँ । तर उडिरहेको चराको दिशा हाम्रो श’रीरमा पर्याे भने के हुन्छ ? यो कुरा सा’यदैलाई मात्र थाहा होला । कतिपय मा’निसहरूले य’सरी उडिरहेको च’राको दि’शा मा’निसहरुको श’रीरमा पर्याे भने त्यसलाई अ’शुभ मा’न्ने गर्दछन् । कहिले काहिँ त्यसरी श’रीरमा पं’क्षीको दिसा परेको बेला केहि न’राम्रो हुन्छ कि भन्ने डर हुन्छ । र हा’मीलाई त्यो बेला रिस पनि उठ्छ ।
श’रीरमा परेको पं’क्षीको दि’साशु’भ होला कि अशुभ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार उडिरहेको चराले मानिसको जिउमा दिशा गर्नुलाई शुभ सं’केत मान्ने गरिन्छ । यस्तो घ’टनाले धन’लाभ हुने, शुभ स’माचार तथा आ’उने दिनमा हुने राम्रो काम तथा कुराको संकेत दिने गरेको ज्यो’तिष शा’स्त्रमा उ’ल्लेख छ । साथै, धेरै अ’गाडी देखिको कुनै रो’किराखेको काम पनि पुरा हुनेछ भन्ने सं’केत दिन्छ ।
केहि देशहरूमा भने यसलाई अ’शुभ मा’निन्छ । साथै, कुनै या’त्रामा जाँदा वा राम्रो काम गर्न लागेको बेला चरा उ’डिरहेको देखेमा त्य’सलाई भने सुभ सं’केत मा’निन्छ । यदि चरा तपाई गइरहेको स्थान तर्फ जान्छ वा दाहिने जान्छ भने यो कार्य सफलता हुने वि’श्वास ग’रिन्छ। त्यस्तै, तपाई ग’इरहेको बा’टो भन्दा उल्टो वा देब्रे तर्फ गएको दे’ख्नु भयो भने यात्रा गर्न नहुने तथा अशुभ मा’निने कुरो शा’स्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
Previous भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो !
Next नायिका ऋचा शर्माको आग्रह : क’ण्डमलाई टोपी नभन्नुस्, क’ण्डम नै भन्नुस् !